Forex Slippage | Chii chinonzi Slippage & Price Improvement | FXCC
Forex slippage yakatsanangurwa
Slippage, mumitemo yekutengeserana, inogona kutsanangurwa zvakanakisisa seine urongwa hwakazadzwa nemutengo wakasiyana nemutengo wakatanga kutaurwa pane yekutengesa. Zvisinei, kutsekwa kunofanira kuonekwa sechiratidziro chakanaka chokuti mumusika uye mutengesi akasarudzwa kushandiswa kwemisika, inoshanda nenzira yakajeka uye inoshanda.
Vatengesi vanogona kuwana mairairo avo akazadzwa nenzira nhatu dzinogoneka; pamutengo chaiwo wataurwa, unoona kusagadzikana kusina kunaka - uko kuraira kwavo kwakazadzwa nemutengo usingatendi, kana kuti vane ruzivo rwakanaka-kana urongwa hwakazadzwa nemutengo uri nani kupfuura mutengo wawakambotaurwa. Ichokwadi kuti kuderera kuripo kunofanira kuonekwa sekusimbiswa kwakanaka kwekuti mutengesi ari kushanda nekakanikidzika, yakakwana uye yakajeka yemusika. Kunyanya panyaya ye ECN yakananga kuburikidza nekugadziriswa, inenge ichinyanya kuva isina kujairika uye zvechokwadi inoshungurudza, kana mirairo yevatengesi yaiwanzozadzwa nemutengo chaiwo wataurwa.
Munzvimbo yakadaro yemusika seFX, kutendeukira kune $ 5 trillion zuva rega rega uye kuuraya mazana emamiriyoni anobatanidzwa zuva nezuva, ndezvekuitika kwepanyama uye kutarisira kunonzwisisika kuti haisi mitemo yose inogona kuenzaniswa zvakakwana munzvimbo yakadaro. Munharaunda yakajeka uye yakajeka ye ECN yekutengeserana nzvimbo, dziva revahedheni rinopa vhudzi rinopa mazano eFX, kukanganisa kunogona kuchinja kamwe kamwe uye kunoshamisa. Nokudaro, mutemo unofananidzwa panguva imwechete pamutengo wakanakisisa unogona kuwanika, dzimwe nguva pamutengo unotaurwa, kana kuti unogona kunge uri pamutengo unopfuura waunotarisirwa.
Chii chinonzi Positive Slippage?
Chinhu chinokonzera kugadzirisa chinozivikanwawo sekuvandudzwa kwemitengo uye iyo inowanikwa apo kutengesa kwemari kunoshanda kune mutengesi.
Semuenzaniso, mutengesi anoisa mutemo ku BUY 1 yakawanda ye EUR / USD pamutengo wemusika we1.35050, urongwa hwakatumirwa kuburikidza neMetaTrader platform kumunhu anopa mari uye ipapo shoko rekusimbisa rinodzoka richiudza mutengesi kuti urongwa hwaiva kuurayiwa pa 1.35045. Kuburikidza neEECN / STP muenzaniso mutengesi akawana maitiro akanaka, vakazadzwa nemutengo uri nani, mutengo unofanirwa nehutano hwavo hwekutanga.